Uma umhambi ngekhanda, singabantwana pretty isiqiniseko sokuthi njalo ukucinga kakhulu izindleko ngendlela ephumelelayo lokubhuka ugibele zakho isitimela. Uma tech buff, ungase uqaphele iqiniso lokuthi manje ongawabhuka amathikithi akho inthanethi kwi-inthanethi futhi lokhu izuzisa kakhulu wonke umuntu. Uma uhlelela i- elilandelayo ngamaholidi, ungakwazi kalula ubhukha amathikithi akho manje bese uthole izaphulelo imali eningi. Kulo post, sizobe ukugqamisa izinzuzo inthanethi iwebhusayithi isitimela yokubhuka kafushane. Uma namanje abazi ngayo, uwageje lokhu okuthunyelwe.
Uma uzimisele ukulondoloza imali yakho, lena enye indlela elula ongakaze uyizwe. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bunike amandla amasu athile lapho ungadingi ngisho nokuphrinta kwethikithi. Ungakhombisa ke kumadivayisi yakho smart noma swayipha amakhadi akho ukuze ubonise ukubhuka zakho.
Gcina Isitimela kungenye indlela enhle yokuthenga amathikithi akho ku-inthanethi. Uma ubona ukuthi usenkingeni ukubhuka amathikithi akho isitimela uchofoze isixhumanisi https://www.saveatrain.com ukuzuza izaphulelo imali eningi.
#inthanethi	#amathikithi	amathikithi	izitimela	amathikithi esitimela